कहाँनिर पर्‍यो एमाले–माओवादी एकतामा अड्को? – www.agnijwala.com
कहाँनिर पर्‍यो एमाले–माओवादी एकतामा अड्को?
अग्निज्वाला काठमाडौं बैशाख ११
–पार्टी निकायहरुमा भागबण्डा मिल्न नसक्नु नै एमाले माओवादी केन्द्रबीचको एकताको सबैभन्दा ठूलो अवरोधका रुपमा देखिएको छ। दुई कार्यदलले सल्ट्याउन नसकेका चुनाव चिन्ह र जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि सहमति जुटिसकेको जानकारी स्रोतहरुले दिएका छन्।
तर, केन्द्रीय कमिटी लगायतका निकायमा भागबण्डा दुबै पार्टीका लागि यति पेचिलो बनिरहेको छ कि, सबै विवाद मिलेपनि पार्टी एकता हुन सकेको छैन। त्यसैले, भागबण्डा अब जति चाँडो टुङ्गिन्छ, एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता त्यति नै चाँडो हुनेछ।
एकता संयोजन समितिले गठन गरेको रामबहादुर थापा नेतृत्वको संगठनात्मक स्वरुप तथा विधान निर्माण सम्बन्धी कार्यदलले एकतापछि पार्टीको केन्द्रीय समिति २ सय ९९ हुने प्रस्ताव गरेको छ। स्रोतका भनाईमा, यो संख्याको प्रस्ताव माओवादी केन्द्रको तर्फबाट गरिएको थियो।
केन्द्रीय कमिटी कति सदस्यीय बनाउने भन्ने विषय त टुङ्गियो। तर, एकता हुँदा कुन पार्टीबाट कति जना रहने भन्ने कुरा चाहिँ कार्यदलले टुङ्ग्याउन सकेन। संयोजन समितिले पनि टुङ्ग्याउन नसकेपछि यो विषय टुङ्ग्याउने दायित्व दुई अध्यक्षको जिम्मा लगाइएको छ।
बैशाख ६ यता भएका तीनमध्ये दुई वटा एक्लाएक्लै वार्तामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच समानताका आधारमा केन्द्रीय समिति बनाउने सहमति भएको थियो। तर, ८ बैशाखको वार्तापछि परिस्थिति उल्टियो।
केन्द्रीय समिति समानताका आधारमा बनाउन आफू सहमत भएपनि त्यसो नगर्न पार्टीभित्रबाट दबाब आएको जानकारी ओलीले ८ बैशाखको वार्तामा गरेका थिए। उनको प्रस्ताव एमालेबाट २ सय र माओवादी केन्द्रबाट ९९ जना राखेर केन्द्रीय समिति बनाऔं भन्ने थियो।
ओलीले यस्तो प्रस्ताव राखेपछि प्रचण्डले ९ बैशाखमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बोलाए, त्यो बैठकमा प्रचण्डले ओली सकरात्मक भएपनि माधव नेपालले बराबरीका आधारमा एकता गर्ने कुरामा सहमत हुन नसकेको ब्रिफिङ केन्द्रीय कार्यालयका सदस्यहरुलाई गराएका थिए।
लेनिन दिवस र पार्टी स्थापना दिवसको असवर पर्ने भएकाले त्यसै दिन एकता गर्दा राम्रो हुने सुझाव कार्यदलले दिएका थिए। त्यसैदिन एकता हुनपनि सक्ने थियो, यदि उपरोक्त विवाद मिलेको भए। तर, भागबण्डा विवाद नटुङ्गिदा ९ बैशाखमा एकता हुने परिस्थिति बनेन।
मिलेका दुई विषय
जनयुद्ध र चुनाव चिन्हका विषयमा चाहिँ ओली र प्रचण्डले सहमति जुटाइसकेका छन्। सहमति भएको विषयमा माओवादीले अस्वीकार गरेपनि चुनाव चिन्ह सूर्य नै राख्ने भन्ने आन्तरिक सहमति दुबै पार्टीबीच भइसकेको छ। तर, एकताको औपचारिक घोषणा नहुँदासम्म यो विषय सार्वजनिक गर्न माओवादीले मानेको छैन।
यसैगरी माओवादी जनयुद्धलाई एमालेले स्वीकार गरेको छ। जनयुद्धले नेपाली राजनीति र समाजमा ल्याएको परिवर्तनप्रति एमाले सहमत बनेको छ। एमालेका जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र माओवादी केन्द्रले भन्दै आएको ‘एक्साइसौं शताब्दीको जनवाद’ मा पनि सहमति जुटिसकेको छ।
हुन त, जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद सम्बन्धमा दुबै दलको कार्यदलमा विवाद थिएन। यद्यपी, दुबै पार्टीले अंगिकार गरेका उपरोक्त विषयलाई के गर्ने भन्ने अन्योल चाहिँ थियो। अब बन्ने दस्तावेजमा ‘जबज’ र ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ को साटो ‘जनताको जनवाद’ राख्न दुबै पार्टी सहमत भएका छन्।
प्रस्तावित २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा आफ्नो तर्फबाट २ सय र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट ९९ जना रहने प्रस्ताव गरेको एमाले यो अडानबाट पछि हटेको छैन। एमालेको केन्द्रीय कमिटी २ सय सदस्यको हाराहारीमा रहेको बताउँदै एमालेले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
एमालेका निर्वाचित केन्द्रीय समिति झण्डै २ सय जनाको भएकाले यो संख्या घटाउन नसकिने प्रस्ताव ओलीले राखेका छन्। उता प्रचण्डले बराबरीका आधारमा केन्द्रीय समिति बनाउने र त्यसपछि ‘एडजष्ट’ गनुपर्ने एमाले नेताहरुलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। तर आआफ्नो अडानबाट ओली र प्रचण्ड दुबै पछि हटेका छैनन्।
एमालेको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा एमालेको तर्फबाट दुई तिहाई र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट एक तिहाई सदस्य राखेर केन्द्रीय समिति बनाऊँ भन्ने हो। तर यसमा माओवादी सहमत छैन। केन्द्रीय समितिमा समाहित हुने संख्यामा भागबण्डा नमिल्दा एकता प्रक्रिया लम्बिन पुगेको छ।